Smith Cottage, Appletreewick, ulala 2
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguLorren
I-cottage ebukekayo ethokomeleyo ibekwe kwiigadi ezintle ezivuthiweyo ezibekwe ekupheleni kwendlela yabucala enendawo yokupaka ngaphandle kwendlela. Ukuhamba nje okufutshane kwii-pubs ezimbini ezidumileyo zombini ezikhonza ii-ales zokwenyani kunye nokutya okuphekwe ekhaya. Ijikelezwe ngamaphandle azukileyo kunye nemibono emangalisayo iAppletreewick yenza isiseko esifanelekileyo seholide yaseYorkshire Dales.
Kutshanje ihlaziywe ngomlingiswa kunye nomtsalane kuyo yonke indawo, le ndlu ivulekileyo ivulekileyo ibonelela ngendawo yokuhlala ebalaseleyo yeeholide ezimbini.
Igumbi lokuhlala elinesicwangciso esivulekileyo linezihlalo ezitofotofo ezine, kubandakanya ibhedi yesofa, isitovu somthi esivuthayo kunye nendawo yokutyela ephangaleleyo. Kukho iscreen esisicaba seTV esinombono wasimahla, isidlali seDVD, kunye nesidlali seCD esifumanekayo kunye nokhetho lweencwadi zeDVD, imidlalo kunye neepuzzle ezinokusetyenziswa ziindwendwe. Iingcango zaseFransi zikhokelela kwindawo enelanga yepatio kunye namanyathelo akhokelela kwigadi yabucala.
Ikhitshi langoku lixhotyiswe kakuhle nge-oveni yombane kunye ne-hob, i-dishwasher, i-microwave kunye nefriji.
Igumbi lokulala libanzi kwaye libekwe kakuhle linebhedi enkulu. Igumbi lokuhlambela le-en-suite lineshawa eyahlukileyo kunye nebhafu enkulu elungele ukuphumla emva kosuku ngaphandle kwiifawula ezikufutshane. Ibhedi yenziwe ngamashiti omqhaphu waseYiputa kunye neetawuli ezithambileyo zinikezelwe.
Itreyi eyamkelekileyo ebekwe ngobisi, iti, ikofu kunye nekeyiki esanda kubhakwa iya kube ikulindile xa ufika ukuze uphumle kwaye wonwabele izimuncumuncu emva kohambo lwakho.
Uxolo akukho zilwanyana zasekhaya ezivumelekileyo kwi-cottage.
Umbuki zindwendwe ngu- Lorren
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Appletreewick